Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo qabatay kulan wacyi-gelin oo muhiim ah – Puntland Post
Posted on November 24, 2021 November 24, 2021 by News Office
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo qabatay kulan wacyi-gelin oo muhiim ah
Wasaarada waxbarshada iyo tacliinta sare ayaa maanta ku qabtay iskuulka hoose dhexe ee salaama primary school ee gobolka Mudug Xuska Maalinta musqulaha aduunka xuskaan oo ay kasoo qayb galeen arday gaaraysa 500 oo arday ,waalidiin, macalimiin iyo masuuliyiinta gobolka oo ogu horeeyo kormeeraha gobolka mudug.
Ayaa ahaa muhiimad sare aan siino isticmaalka suuliyada. waxaana si weyn looga hadlay muhiimada ay Nadaafadu u leedahay aadanaha iyo isticmaalka suuli nadiif ah.
Maamulaha Schoolka salaama primary school Guray Cabdulaahi khaliif ayaa ardayda ugu baaqay inay kafaaidaystaan munaasabadaan ayna ilaaliyaan Nadaafada iyo fayadhowrka kuna dadaalaan Marwalba inay hagaajistaan suuliyada iskuulka si loo ilaaliyo Caafimaadka ardayga waayo arday caafimaad qaba ayaa leh jir caafimaad qaba.
19-ka november waxaa loo asteeyey maalinta xuska maalinta musqulaha aduunka waxaana Munaasabadaan lagu dhiiragalinayo ardayda inay faraha isticmaal musqulaha sida ugu haboon ayna faraha dhaqdaan lagu qabtay Schoolka salaama primary school ee magaalada Gaalakacyo.
Kormeeraha guud ee gobolka mudug ee waxbarashada Maxamad cabdiraxmaan jaamac shufeer ayaa sidoo kale xalfada kajeediyay in lajoogteeyo dayactirka musqulaha iyo isticmaalida saabuun wuxuna xusay nadaafadu inay tahay imaam barkii loona baahanyahay in guriga laga bilaabo nadaafada lana isticmaalo saabuun joogta ah.
Ugu danbayntii Cabdishugri Maxamed Faarax dhaashane oo ah Madaxa ku xigeenka Washka ee wasaaradda waxbarashada ayaa ka hadlay muhiimada ay nadaafadu in la isticmaalo musqul nadiif ah ,wuxuu kaloo xusay taariikhada maalintaan iyo inay tahay maalin caalamkoo dhan laga xusayo. waxaa kaloo uu sheegeen inay muhiim tahay in faraha la dhaqdo marka la isticmaalo musqusha xiliyada isticmaalka Suuliga,Cunto cunida kadib iyo kahor, in la nadiifiyo musqulaha iskuulka ,saxanka faradhaqa iskuulka saabuuntuna ay markasta diyaar kutahay meesha faradhaqa iyo ka hor si loo ilaaliyo Nadaafada ardayga iyo tan deegaanka.
Waxaa kaloo uu ardada si practical ah ula wadaagay una tusiyay 8 hab ee faraha loo dhaqdo ee ku haboon faradhaqashada iyadoo ardayduna ay si toos ah u sameeyeen markay kasoo baxaan musqusha waxaana uu ardayda ,macalimiinta iyo waalidiinta bahda waxbarshada ugu baaqay inay dhowraan gaar ahaan nadaafada musqulaha iskuulka khaasatan xiliyadaan qaboobaha ah oo uu jiro xanuunka covid-19. Xuska ayaa ku soo dhamaaday guul iyo wacyigelin gartay dhamaan ardada.